‘स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, यो निर्देशनको अर्थ के हो ?' - Nawajagaran
‘स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, यो निर्देशनको अर्थ के हो ?’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालहरुले कोभिडका विरामीको उपचार अघि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले सामाजिक संजालमार्फत सरकारको यस्तो निर्णय विवेकहीन भएको बताएका हुन् ।
केही दिनअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडका विरामी भर्ना मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्न काठमाडौं उपत्यकाका अस्पताललाई परिपत्र गरेको थियो ।
थापाले लेखेका छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, यो निर्देशनको अर्थ के हो ? लेखिएजस्तो विरामी भर्ना गर्नुपूर्व अस्पताल वा विरामीले मन्त्रालयको सिफारिस लिनुपर्ने भन्ने हो भने यस्तो विवेकहीन र अव्यवहारिक कुराको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । लेखिएभन्दा फरक आसय हो भने के भन्न खोजेको हो प्रष्ट बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्।’
असोज ५ देखि आन्तरिक उडान र लामो दूरीको यातायात संचालन गर्ने सरकारको निर्णय